Guddoomiyaha Xisbiga UCID ‘Feysal Waraabe’ oo ka hadlay Xiisadda ka sii dareysa ee Somaliland (Maxa cusub)? | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Guddoomiyaha Xisbiga UCID ‘Feysal Waraabe’ oo ka hadlay Xiisadda ka sii dareysa...
Guddoomiyaha Xisbiga UCID ‘Feysal Waraabe’ oo ka hadlay Xiisadda ka sii dareysa ee Somaliland (Maxa cusub)?
Hargeysa (Halqaran.com) – Muddooyinkan dambe waxaa Somaliland ka jiray muran siyaasadeed oo u dhexeeyay Xukuumada iyo Xisbiyada mucaaradka, iyada oo guddi is xilqaamay uu dhex dhexaadin ka dhex wado labada dhinac.
Dhinaca kale, baarlamaanka ayaa lacago ka jaray miisaaniyaddii xisbiyada.
Guddoomiyaha Xisbiga UCID ee Somaliland Feysal Cali Waraabe ayaa sheegay in Xubnaha guddiga doorashooyinka ee leysku heysto ay yihiin kuwo Sharci darro ah oo aan soo marin nidaamka iyo Dastuurka Somaliland.
Sidoo kale, waxaa uu ka horyimid muddo kordhinta loo sameeyey xubnaha labada Gole ee Somaliland iyo miisaaniyaddii laga jaray Xisbiyada Somaliland.
Guddoomiye Feysal Cali Waraabe
ka hadlay xiisadda ka jirta Somaliland